Maxaa la sameeyaa haddii Ipad la xado - Geofumadas
Janaayo, 2014 Apple - Mac
Arinta arrintu way muuqan kartaa, laakiin ugu dhakhsaha badan ama ka dib waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxaad samaynayso markaad wax xadiddo iPad Inkastoo qaar ka mid ah arrimahan ay khuseyso iPhone, iPod Touch iyo iMac, waxaan rabaa in aan ka faa'iidaysto si aan ugu sharixo sharafta wax aan ka baranayey maalin maalmaha ka mid ah:
1. Iska ilaali inaad naftaada u soo bandhigto xatooyada sida ugu macquulsan.
IPhone-ku waa aalad isgaarsiineed oo lagama maarmaan ah marwalba, iPad-ku waa aalad shaqo. Waxay bedeshay xusuusqorkeena waraaqda, qalinka, laptop-ka, kamarada, buuga, iyo gameboy. Marka waa inaad ka fogaataa soo bandhigiddeeda si aan loo baahnayn, qofkii rajeynaya inuu xado alaabada elektaroonigga ah wuu ku raaci doonaa oo wuxuu raadin doonaa kormeer kasta.
Haddii aad qadada u socoto, ha ka tagin miiska, laakiin waxay ku xiran tahay furaha iyo furaha, xitaa haddii qof kasta oo xafiiskaaga ah uu yahay mid sharaf leh.
Haddii ay iloobaan, ha u qaadin meel aan degdeg ahayn.
Haddii aad saaxiib la cunayso, ha u qaadan, waa qalab shaqo, maaha wax aad u jahwareersan waqtiyada aad u baahan tahay inaad u diyaarsatid dadka muhiimka ah.
Haddii aad ku qaadatid gaariga, ha ku qaadin kursiga dhinaciisa, haanta hore, ama santuuqa albaabka. Ha u oggolaan in ilmahaagu ku qaado kursiga dambe isagoo ciyaaraya Shimbiraha careysan, ha u isticmaalin naftaada intaad gaariga wado. Tan ugu sarreysana, ha u furin muraayadda aagga magaalada, maalin kasta way ku sii badan tahay mootadu inay istaagto dhinaca nalka taraafikada ama gaabiska taraafikada, taasoo kugu qasbeysa inaad siiso taleefanka gacanta, boorsada jeebka, ama wax kasta oo muuqda .
Haddii aad ku qaadato qarsoodiga gaariga, waxay noqon kartaa waxtar badan inta aad ka fikiraysid, gaar ahaan haddii gaarigaaga la xado.
Haddii aad carruurtaada la aaddo suuqa, haddii aan loo baahnayn, ha qaadan. Kala sooc aaladda shaqada iyo nolosha qoyska, guriga waxaa loo isticmaali karaa in lagu daawado Facebook ama la ciyaaro carruurtaada (maxaa yeelay waxay kaloo u shaqeysaa aalad madadaalo ah)
Hadana waa inaad xirataa, markaa hubi inaad taqaano sida loo qariyo. IPad mini wuxuu ku habboon yahay dhexda buugga, jeebka gudaha ee jaakada, xitaa gacanta hoosteeda.
2 Ogow wixii aad samayn lahayd haddii aad lumiso.
Qofna ma filayo in uu dhaco, laakiin waxaa ugu wanaagsan in loo diyaar garoobo, markaa talooyinkaas maskaxda ku hay.
GPS markasta shid. Waxyaabahani waxay keenaan qalab, markaa haddii la xado waxaad kala socon kartaa internetka meesha uu joogo, ama ugu yaraan meeshii tuuggu aaday.
Hayso barnaamijka raadinta iPad-ka rakib, oo awood u yeelo shaqeynta goobaha guud. Noocyadii hore ee macruufka tani way naafoobi kartaa, hadda waxay u baahan tahay ereyga sirta ah. Maskaxda ku hay in ay shaqeyso oo keliya marka kumbuyuutarka uu ku xiran yahay internetka, marka haddii aad joogto dal kale oo aadan haysan SMS firfircoon way adkaan doontaa
Hayso furaha firfircoon ee iCloud.com, oo tijaabi sida qalabku ugu shaqeynayo marka hore. Haddii aaladda lagu xado dariiqa, sabab la'aan raac tuugga, toos u gal internetka oo ka fikir waxa la sameynayo. Haddii aad uga tagtay wax la ilaaway, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad aqoonsato halka ay ku taal. Haddii aysan aqoonsan, waxaa suurtagal ah in la isku raaco in fariin ay gaarto boostada markii qalabku ku xirmayo internetka, tan waa inaad dhaqaajisaa ikhtiyaarka habka xatooyada, taas oo sidoo kale badbaadin doonta booska khariidada mar kasta oo ay isku xirto.
Furaha qufulka ka dhig mid firfircoon. Xoogaa dhib kuma aha in la qoro mar walba, laakiin haddii ay dhacdo xatooyo ama khasaaro, waxay ku siinaysaa xoogaa waqti ah ka hor intaadan orod ku sameyn si aad dib ugu dejiso cabsi laga qabo inay ka saaraan macluumaad muhiim ah
Gali akoonnada aad isleedahay way ku furan yihiin iPad-ka oo xir xirmooyinka firfircoon. Facebook iyo Gmail ayaa tan u oggolaanaya iyadoon loo baahnayn in wax laga beddelo lambarkaaga sirta ah. Xusuusnow nooca akoonnada aad had iyo jeer isticmaasho, doorbideyso inay xusaan, sida Twitter, Skype, Dropbox, haddii loo baahdo beddel erayga sirta ah, tan waxaa lagu sameyn karaa nabadgelyo maskaxeed inta qalabku xiran yahay.
Marka koontooyinka la xidho, haddii qalabku aanu ku xirnayn internetka, waad ku dhiiran kartaa inaad furto, haddii tuuggu yahay dameer, wuxuu isku dayi karaa inuu ku xirmo internetka. Haddii aad leedahay sawirrada isku dhejisan Dropbox, xitaa waxaad arki kartaa sawirrada uu ninku qaadanayo oo ay wax qaban karaan, xitaa haddii ay tahay inaad ku tuurtid habaar.
3. Go'aanso waxa la sameeyo si dib loogu soo celiyo
Haddii aad aragto in qalabku weli ku xiran yahay, hal dariiq oo loo raaco waa iyadoo iPhone ku xiran internetka, kaliya waa inaad iska diiwaangelisaa halkaas oo aad rabto inaad raadiso qalab kale, dhaqaaji furaha Apple waadna raaci kartaa. Cag ha ku raacin.
Haddii aad joogtid isla dhismaha ama xafiiska, isdeji, kaliya u soo dhawaaw sida ugu macquulsan oo dhaqaaji codka. Waxay ka yeeri kartaa kursiga musqusha, shandada qofka aad la shaqeysid ama xitaa surwaal haweeney duug ah… Ogow waxay kuu sheegi doonto
Haddii aad ku jirto meel dadweyne, iskuday inaad dib u soo kabato balse aadan keligaa tagin, waxay noqon kartaa ilaaliyaha aasaaska.
Haddii aad ku jirto pawnshop waxaad u baahan doontaa biilka iyo suurtagalka amarka booliiska.
Haddii aad ku sugan tahay aag khatar ah, dib uga fiirso inta noloshaadu mudan tahay. Waxay noqon kartaa inaad kudhamaato luminta iPhone-kaaga kale, gaarigaaga, iyo xitaa noloshaada. Waxay kuxirantahay wadanka aad kujirto, fiiri hadaad ku kalsoontahay booliska deegaanka howlgalka samatabbixinta, qofna ma doonayo inuu cadaw ka dhigto mustaqbalka waxyaalo farshaxan oo aan naf lahayn.
4. Waxa la sameeyo haddii aadan la socon karin
Noocyadii hore ee iPad-ku aad bay ufududnaayeen dib-u-dejinta ama curyaaminta gps-ka. Way sii wadi karaan inay ahaadaan maxaa yeelay iyagu ma aqbalaan qoraalkii dhowaa ee iOS.
Si kastaba ha noqotee, waxay ku dhici kartaa qalab cusub. Waxaa jira tuugo si gaar ah u takhasusay oo si daacadnimo ah wax dammaanad ah ma leh haddii qalabka la damiyo la heli karo.
Haddii aad ogaato in qalabka aan la soo celin karin, ka koontada iCloud dooro tirtir waxyaabaha. Tan waxaad ku deganaan doontaa.
Ha ilaawin inaad soo sheegto xatooyada, maxaa yeelay waxay ka muuqan kartaa goob dambiyeed waxayna warbixintu naga ilaalin kartaa jahwareer. Waxay kaloo leeyihiin mobiil guurguura oo dambiilayaashu u isticmaali karaan baad.
Ha dhibsan, ha ooyin, ha is garaacin, ama ha u oggolaan in naagtaadu ay ku barato. Kaliya aqbal in ay kugu dhacday maje. Raali noqo erayga, laakiin maalinta aad waydo wax kayar ma dareemi doontid
Markaa ka fikir sida loo iibsado mid kale wixii hada ka dambeeyana si fiican u noqo shakhsiyaad. Haddii aad isticmaaleysey muddo sannad ah waxaad ogaan doontaa inaadan noolaan karin la'aanteed.
Waxaan kaliya weydiinayaa: maxaa diidaya in isugeyn guud oo qiimahiisu yahay $ 9,000 aysan haysan qalab lagu soo cesho? A $ 250 iPod fudud ayaa leh; waxaan hubin lahayn inaan diyaar u nahay inaan intaas ku bixino.
Post Previous" Hore BlogPad - Tifatiraha WordPress ee iPad
Post Next Waa maxay jinsiyadu waa inay ka ogaadaan heerka maareynta dhulka ee LADMNext »
Hal Jawaab "Maxaa la sameeyaa haddii Ipad la xado"
hahaha Ma garanayo sababta aan u maleynayo in laga qaaday sheeko dhab ah oo nolosha